Sambava: Teratany Frantsay noroahim-badiny ka lasa nirenireny
lundi, 29 janvier 2018 17:04
Ny alahady 28 janoary 2018 tokony tamin’ny valo alina no nisy olona tsara sitrapo nahita ity teratany Frantsay ity mitomany teny amorontsirak’i Sambava centre.
Nitantara ny nanjo azy Atoa Mosimann Jan Heiner fa noroahim-badiny, izay vehivavy Malagasy monina ao Antalaha izy ka lasa nirenireny ary mbola nisy nanendaka sy nidaroka tany an-toerana ihany koa, ka naratra ny faritry ny masony.
Niezaka niala tao Antalaha izy ka nandeha teto Sambava handeha hitady ny renin-janany iray, izay efa niterahany vavikely manodidina ny 8 taona eo fa “tsy nety nampandroso” azy ihany koa ity farany ity satria “efa misy lehilahy Malagasy miaraka aminy ao” hoy izy hany ka lasa natory tany amoron-dranomasina no niafarany nandritra ny alina.
Nampandrenesina ny Commissariat de Police eto Sambava, niantso ny fianakaviany any Frantsa ihany koa izy araka ny teniny.
Androany maraina dia azony tamin’ny antso an-tariby ilay ramatoa ao Antalaha, izay voalaza fa vadin’io teratany frantsay io. Nanazava ilay ramatoa fa “tonga tampoka ary nivantana tato amiko tokoa io vazaha io ny 17 janoary 2017”. Ny nanaitra ahy, hoy hatrany ity ramatoa ity , dia “tsy nisy entana afa-tsy kitapo kely iray teny aminy ary tsy azoko inona ny nahatongavany tampoka”.
Ankoatra izay dia tsy voatazona fa isaky ny alina dia mitady ny handeha hivoaka irery ity vazaha ity, hoy hatrany izy ka tamin’ny fivoahany farany dia nodarohin’ny “foroche” tany ka teo nahatonga ahy nanapa-kevitra fa “tsy afaka nandray azy intsony”.